फ्रान्सले जित्नेछ विश्वकप !यस्तो छ आधार | Ekhabar Nepal
खेल असार २६ २०७५ ekhabarnepal
विश्व खेलकुदको ठूलो तथ्यांकीय श्रोत ओप्टाले रुस विश्वकपको उपाधि फ्रान्सले जित्ने दाबीसहितको अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक अध्ययनमा फ्रान्सले विश्वकप जित्ने सम्भावना ४१ प्रतिशत देखाएको छ। यस्तै अध्ययनले दोस्रोमा बेल्जिमय(२१ प्रतिशत), तेस्रोमा क्रोएशिया(२० प्रतिशत) र चौथोमा इंग्ल्याण्ड(१८ प्रतिशत)को विश्वकप सम्भावना देखाएको छ।
अध्यनका आधार के ?
कुन देश कसरी पुगे सेमिफाइनलमा ?
समूह चरणमा इंग्ल्याण्डले ट्युनिसिया, पानामालाई पराजित गरेको थियो भने अन्तिम खेलमा बेल्जियमसँग पराजित हुँदै समूहको उपविजेता बन्दै अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको थियो। नकआउट चरणमा कोलम्बियालाई र क्वार्टरफाइनलमा स्वीडेनलार्इ पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो।